Ciidamada Ciraaq Oo Xaafado Badan Oo Ka Tirsan Magaalada Mowsil Gacanta Ku Dhigey – Goobjoog News
سیطرۀ داعش بر موصل اشغالی
Ciidamada dowladda Ciraaq ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay soo ceshadeen 80 xaafadood oo ka tirsan magaalada Mowsil kuwaas oo horay ay gacanta ugu hayeen ururka Daacish.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay howlgalkii millatari oo Daacish looga xoreynaayay Mowsil saddex bil ka hor halka uu wali uu socdo dagaalka lagula dagaalamayo daacish .
Dhanka kale waxay sheegayaan Ilo dhanka ammaanka in Jaamacdda magaalada Mowsil ee ku taallo waqooyiga magaaalada ay wali ku suganyihiin daacish laga maqlayo israsaaseen u dhaxeysa labada dhinac inkastoo qeybo badan oo ka tirsan Jaamacadda ay gacanta ku dhigeen ciidamada Ciraaq.
Ciidamada ayaa waxay celieen weerar ragool celis ah kaas oo ay ku soo qaadeen Ururka daacish xilli ciidamad Ciraaq ay baaritaan ay ka wadeen dhismayaasha Jaamacadda Mowsil.
Waxay ahayd 17, October 2016 markii lagu dhawaaqay howlgal ballaaran oo dib loogu soocelinaayo Mowsil oo ay gacanta ku hayeen daacish howgalkaas oo ay hurmuud ka ahaayeen ciidamad Ciraaq iyo Mareyanka taasoo keentay qeybo badan oo ka tirsn magaalada laga saaro daacish.
WAR DEG DEG AH: Kulan lagu soo afjarayo khilaafka madaxda dowladda oo hadda ka furmay Xalane
essay writing sites - my best friend essay writing custom re...
affordable thesis writing - http://payxessays.com/ pay essay...
paperwriter - http://payxessays.com/ buying a research paper...
essay edit - http://payxessays.com/ college essay assistance...
academic writing services uk - custom dissertation services...